रेडियो र टिभी उत्पादन - DYs, Vjs, नाइटक्लब 2020 का लागि NYE काउन्टडाउन
रेडियो र टिभी वाणिज्यिक उत्पादन
NYECountdowns.com विश्वको सबैभन्दा अविश्वसनीय रचनात्मक, पुरस्कार विजेता उत्पादन घरहरू मध्ये एकको बहिनी कम्पनी हो… किलरस्पट एजेन्सी।
हामीले सयौं नाइटक्लबहरू, रिसोर्टहरू, प्रमोटरहरू र एरेनास वर्ल्डवाइडलाई उनीहरूको सब भन्दा ठूलो पार्टीको लागि 20 वर्ष भन्दा बढीको लागि तयार हुन मद्दत गरेका छौं। अब तपाईंको पालो! केहि छिटो चाहिन्छ? रेडियो स्पटहरू, टिभी स्पटहरू, वेब र सोशल मीडिया भिडियो ... भयो!
कुनै भाषा। कुनै पनि लम्बाई। विश्व मा जहाँसुकै!
केहि समय तालिका बनाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् तपाईंको आगामी प्रोजेक्टमा जानका लागि।
रेडियो विज्ञापनहरू जुन तपाइँको नयाँ वर्षको चाडलाई EPIC बनाउँदछ! हामीले सयौं नाइटक्लबहरू र स्थानहरू वर्षौंपिच्छे हत्यारा रेडियो उत्पादन गरेका छौं। एक हत्यारा रेडियो वाणिज्यिक प्राप्त गर्नुहोस् जुन वास्तवमा अब तपाईंलाई व्यवसाय प्राप्त गर्दछ!
30 Sec रेडियो स्पट
30 Sec TV स्पट
अतुलनीय टेलिभिजन र वेब स्पटहरू जुन तपाईंको मोजेहरू बन्द गर्दछ ... कुनै भाषामा! हामीलाई नयाँ सालको अवसरमा तपाईंको ढोका मार्फत गधाहरू ल्याउनको लागि हाम्रो विशेष टेलि पुरस्कार विजेता सृजनात्मक प्रसारण उत्पादन सीप प्रयोग गरौं! टर्नअराउन्ड समय 5-7 व्यवसाय दिनहरू हो ... त्यसैले समय सक्यो भन्दा पहिले HURRY!
60 Sec वेब / टिभी स्पट
तपाइँको महाकाव्य नयाँ वर्षको पूर्वानुमान लाई बढावा दिन सोशल मिडिया एक उत्तम तरिका हो। हामी तपाईंलाई वेब भिडियो बनाउँदछौं जुन तपाईं साझा र आम जनतामा ल्याउन सक्नुहुन्छ! तपाईं यो ग्यारेन्टी प्रेम गर्नुहुन्छ।